Cimilada Kolombiya | Safarka Absolut
Mid ka mid ah dhinacyada ka yaabiya dadka safarka ah ee booqda Kolombiya markii ugu horreysay waa isku mid ahaanta cimilada sannadka oo dhan. Sababtuna waxay tahay wadanku wuxuu kuyaala aagga dhul-baraha, sidaas darteed xilliyadu maaha kuwo khibrad leh sida ummadaha adduunka intooda badan saacadaha ay qorraxdu u soo baxdo ama u dhacdona isma beddelaan.
Kolombiya waa wadan leh kala duwanaansho aad u baaxad weyn marka laga hadlayo cimilada, laga bilaabo heerkulka qabow illaa cimilada kulaylaha. Waxay leedahay laba xilli oo waaweyn: mid qalalan (laga bilaabo Disembar ilaa Janaayo iyo Julaay ilaa Ogosto) iyo mid qoyan (laga bilaabo Abriil ilaa Maajo iyo Oktoobar ilaa Nofeembar). Laakiin tan kor ku xusan macnaheedu maaha in cimilada Kolombiya ay isku mid tahay. Xaqiiqdii, kala duwanaanta kaladuwanaanta badan ayaa siineysa dalka tiro badan oo muuqaallo ah, sagxadaha kuleylka iyo kaladuwanaanta.
Dhab ahaan, mahadnaqa noocyadan kala duwan, safarleydu waxay fursad uhelaan inay doortaan waqtiga ugufiican ee ay booqdaan Colombia iyagoo kuxiran haday doorbidaan kuleyl iyo qabow. Si loo caddeeyo goorta la aadayo dalka, waxaa ugu wanaagsan in la ogaado heerkulka aad la kulmi karto si loogu diyaar garoobo xaalad kasta.
1 Waa maxay cimilada Colombia?
2 Waa maxay waqtiga ugu fiican ee loo safro Colombia?
Waa maxay cimilada Colombia?
Cimilo diiran: Meelaha cimiladan leh, kuleylku wuxuu ka sarreeyaa 24 ° C, sida ku dhacda Baasifigga (halkaas oo aad ka daawan karto nibiriyada humpback) ee xeebta Kariibiyaanka (halkaasoo ay ku taal Tayrona National Dhirta Dabiiciga ah iyo halka ay ku taal carnival-ka caanka ah ee Barranquilla) iyo San Andrés (waa meel leh xeebo qurux badan oo loogu talagalay quusitaanka iyo ku celcelinta cayaaraha biyaha).
Cimilo xumo: Heerkulku wuxuu u dhexeeyaa 17 ° C iyo 24 ° C meelaha ay ka mid yihiin Cali (hoyga carwada caanka ah ee Cali) iyo Medellín (halkaas oo ay ka dhacdo Carwada Ubax).
Cimilada qabow: Goobaha leh cimilada noocan ah, heer kulku wuxuu u dhexeeyaa 12 ° C iyo 17 ° C. Tani waa xaaladda Bogota, caasimadda Kolombiya. Magaalo fureysa dhaqan iyo casriyeyn loo yaqaanay Athens-ka Koonfurta Ameerika. Booqashada lagama maarmaanka u ah in lagu sameeyo Bogotá waa Matxafka Dahabka.Waxaa lagama maarmaan ah in wax laga barto ilbaxnimooyinkii hore ee Isbaanishka ama halyeeygii caanka ahaa ee El Dorado.
Waan istaagnay: Meelahan, heerkulku wuxuu u dhexeeyaa 6 ° C iyo 12 ° C. Tani waa xaaladda Beerta Dabiiciga ah ee Chingaza, oo ah hanti dabiici ah oo ku taal Bariga Cordillera ee gobolka Andean ee Kolombiya. Noocyada sida tacsida, bahasha Andean iyo deerada cirro cirro leh ayaa halkan deggan.
Aagagga jinsiyadda: Heerkulka ka hooseeya 6 ° C ayaa halkan lagu soo maray. Tani waa kiiska Sierra Nevada de Santa Marta, oo ku yaal woqooyiga Colombia ee Xeebta Caribbean, halkaas oo aad ku tagi karto socodka.
Kaymaha kulaylaha ah: Heerkulka ka sarreeya 27 ° C, keymaha kulaylaha waa kuwo qoyan oo kulul. Kaasi waa kiiska xeebta Baasifigga, Magdalena iyo dooxooyinka Catatumbo iyo Amazon, kaymaha ugu qanisan uguna badan ee kala duwanaanta meeraha adduunka oo aad ku raaxeysan karto dabeecadda xiisaha badan. Roobku waa badan yahay sanadka oo dhan, waa bisha Maarso markay gaadhaan qiimahooda ugu sarreeya. Si kastaba ha noqotee, roobabka ugu yar ayaa da'a inta u dhexeysa Juun iyo Sebtember. Sidaa darteed, roobab yar awgood, bilaha Luulyo iyo Ogosto waa waqtiga ugu fiican ee loo safro Amazon.
Steppe kuleylaha: Waxaa lagu gartaa roob yaraanteeda, kuleylka badan iyo dhirta oo ku yar. Laba tusaale ayaa ah lamadegaanka Candelaria ee Boyacá ama La Guajira, kaas oo lagu garto ciiddiisa waaweyn ee ciidda iyo muuqaalka lamadegaanka. Halkan waxaad ku booqan kartaa ranchería si aad u ogaato dhaqanka dadka asaliga ah ee Wayuu.
Cimilada Savannah: Ku soo bandhig Orinoquia, Bolívar, Waqooyiga Huila iyo xarunta dooxada Cauca. Waxaa lagu gartaa xilli qalalan iyo xilli roobaadka, oo leh dhir daaq ah.
Cimilada roobka oo qoyan: Kusoo bandhig Caquetá, Vaupés, qayb ka mid ah Antioquia iyo Córdoba. Roobab hoose, kala duwanaanta heerkulka sare iyo dhir yar oo cufan.
Waa maxay waqtiga ugu fiican ee loo safro Colombia?
Waqtiga ugu fiican ee loo safro Colombia waxay kuxirantahay gobolka aad rabto inaad ku booqato fasaxaaga. Wadanku wuxuu leeyahay kala duwanaansho kaladuwanaansho oo ballaaran oo u tarjumaya noocyo aad u ballaaran oo muuqaal ah, kala duwanaansho kala duwan iyo cimilo.
Tusaale ahaan, Gobollada Andean, waqtiga ugu wanaagsan ee lagu baran karo meeshan waa bilaha Luulyo iyo Ogosto maxaa yeelay inta lagu jiro muddadan waxaa jira heer kul kulul iyo roobab yar., taas oo ku habboon safarka. Waqtigaan waa inaad ku darto dhar diiran shandadaada (maxaa yeelay way qabowtaa qorrax dhaca, habeenkiina qabow). Waxa kale oo lagugula talinayaa inaad keento shaashadda qorraxda, maadaama joogga aagga uu kaa dhigi karo inaad si fudud u gubto xitaa haddii heer kulka uusan aad u sarreyn.
Si aad u aado magaalooyinka ku yaal hareeraha Amazon sida Leticia, waqtiyada ugu fiican waa bilaha Luulyo iyo Ogosto maxaa yeelay inkasta oo ay jiraan roobab hadana waxay sidoo kale kulushahay sanadka oo dhan xeebta woqooyi ee Baasifigga. Aadida xeebta Koonfurta Baasifig bilahaan sidoo kale waa kuwa ugu haboon. Sidoo kale, Juun iyo Sebtember waxay ku habboon yihiin booqashada aaggan. Inta udhaxeysa Diseembar iyo Abriil waa waqtiga ugu fiican ee la booqdo xeebta Kariibiyaanka.
Haddii aad rabto inaad u safarto Kolombiya si aad ugu raaxaysato muraayadaha ubaxyada, markaa waa inaad safartid bilowga xilli-roobaadka maxaa yeelay dhamaadka, daadadku waxay ka dhici karaan meelaha dalka qaarkood. Marka laga reebo waa gobolka ku xeeran Bogotá iyo xeebta Caribbean-ka.
Sidoo kale, intaad qorsheyneyso safarkaaga Kolombiya waa inaad xusuusnaataa in aagga waddanka aad tagto uu aad u sarreeyaa, meelahaasna ay ka qabownaan doonaan. Tusaale ahaan, buuraha dhaadheer waxaa ku daboolan baraf jooggoodu yahay 4.500 mitir. Macluumaadkan oo dhan oo ku saabsan cimilada Kolombiya, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad ku biloowdo xiisahaaga waddankan quruxda badan ee Koonfurta Ameerika.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cimilada Kolombiya
Daaraha waaweyn ee ugu muhiimsan Hindiya